ရည်းစားနဲ့ မယူသေးခင် အတူအိ ပ် သင့်လား…..? – XB Media Myanmar
ရည်းစားနဲ့ မယူခင် အတူနေသင့်သလား ၊ မနေသင့်ဘူးလား လို့ လာမေးခဲ့ဖူးသူ ရှိတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကို မဖြေခင် ကျွန်မက သူမကို ပြန်မေးလိုက်တယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အတူ နေချင်တာလဲလို့ …?
ရည်းစားရဲ့ ဆန္ဒဖြည့်ဖို့ အတူ သွားအိပ်မှာလား …?
ရည်းစားနဲ့ အတူအိပ်ရုံ (လိင် အာသာဖြေရုံ) အတူနေမှာလား …?
အပျို မဟုတ်တဲ့ အတူတူ မထူးပါဘူးလေ ဆိုပြီး တွဲတဲ့သူနဲ့ မြဲအောင် အတူ သွားအိပ်မှာလား …?
အဖော်စုံရုံ ၊ ပျော်ရုံလေး အခြေအနေဖန်လာရင် တွေ့တဲ့သူနဲ့ အိပ်လိုက်မှာလား …?
အိမ်ထောင်ဘက် အဖြစ် ရည်ရွယ်ထားလို့ တယောက်အကြောင်း တယောက် ပိုသိလာအောင် တခါ အိပ်ရုံမဟုတ် ရေရှည်သဘော နေသွားချင်တာလား …?
ဒီမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင် ပြန်မေးပြီးမှ လက်မထပ် ရသေးတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ စပ်ယှက်ဖို့ကို တွေးပါ။ တကယ်တော့ မြန်မာ လူမှုဝန်းကျင်မှာ မိန်းမပျိုလေး မှန်ရင် ဘယ်အမျိုးသားနဲ့မှ လက်မထပ်သေးဘဲ အတူမနေရဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစပ်ယှက်ရဘူးလို့ တားမြစ်လက်ခံ ထားကြတာပါ …။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ။ ကလေးတွေ မသိတမျိုး ၊ သိတမျိုး ဖျက်ချနေတာ ၊ စွန့်ပစ် ကလေးတွေ များလာတာ တွေဟာ လက်မထပ်ခင် အတူနေကြခြင်း ဖြစ်တယ် လို့ သက်သေခံနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဘာဖြစ်လို့ အတူ နေချင်တာလဲ လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးခိုင်းတာပါ …။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လက်မထပ်သေးဘဲ အတူနေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က တညအိပ်ရုံ ဆက်ဆံရေး ၊ ပိုလေးနက်လာရင် ခဏ ခဏ ချိန်းတွဲကြည့်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊ ပိုလေးနက်လာရင် တမိုးအောက်မှာ အတူပြောင်းနေကြတဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊ ပိုလေးနက်လာရင် လက်ထပ်ခွင့် တောင်းပြီး စေ့စပ်ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊ ပိုလေးနက်လာရင်တော့ တစ်ဘဝစာ လက်ထပ် ပေါင်းသင်းခြင်းပါပဲ …။ဒီတော့ အမျိုးသားနဲ့ အတူ နေချင်တဲ့ ကိုယ်ကကော ဘယ်အဆင့် မျိုးမှာလဲ။ အများအားဖြင့်က ခဏ ခဏ ချိန်းတွဲကြည့်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်နေပြီး တချို့တွေက တခါအိပ်ရုံ ဆက်ဆံရေးလည်း ရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် …။
တခါက တူအရွယ် လူငယ်လေးက အုပ်စုလိုက် လျှောက်လည်ရင်း သူ့သူငယ်ချင်း ရည်းစားနဲ့ အတူနေ ဖြစ်သွားတာ ဘာလုပ်ရမလဲ လို့ လာတိုင်ပင် ဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အုပ်စုလိုက် အလည်ထွက်ရင်းက ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ရည်းစားနဲ့ အတူ အိပ်လို့ ရတဲ့ခေတ် ဖြစ်သွားပြီလား လို့ ကျွန်မ အတော်အံ့သြသွား ခဲ့တယ် …။မတော်လို့ ကိုယ်ဝန် ရှိလာရင် မင်းဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က တခါပဲ စားတာတဲ့ ၊ သူ့သူငယ်ချင်းက အခါခါ စားနေတာမို့ ယူမယ့်ယူ သူတာဝန် ယူရမှာပေါ့တဲ့ ၊ ကျွန်တော်နဲ့ အဝေးကြီးလို့လည်း ပေါ့တန်တန် ပြောတာ ကြားဖူးခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို အကန့်တွေလည်း ရှိတယ်တဲ့ …။
သြော် ခေတ်တွေ ကမောက်ကမ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီပဲလို့ ကျွန်မ လက်ခံလိုက်ရတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အိပ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးလို့ တွဲနေတဲ့ ကောင်လေးသိသွားရင် ၊ မှားယွင်းလို့ ကလေးရသွားပြီး အဖေလို့ ခေါ်နေသူနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ အပါအဝင် ရုပ်ရည်ချင်း မတူရင် ယူဖြစ်စေဦးတော့ ဒီအိမ်ထောင်ရေး ဘယ်လို သာသာယာယာ မြဲမြံတော့မလဲ …?
ဒီမိန်းကလေး ဘယ်လို ခံယူချက်မျိုးနဲ့ ရည်စား သူငယ်ချင်းနဲ့ စပ်ယှက်ဖို့ သဘောတူ လက်ခံခဲ့သလဲ တွေးနိုင်ဖို့ ကျွန်မ ဦးနှောက်က ဉာဏ်မမီနိုင်ပါဘူး။ မတော်မတက် ကလေးများရခဲ့ရင် ကလေးခမျာ သနားစရာပါ …။တချို့တွေက အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သူ့ရည်းစားနဲ့ အဆင်မပြေလို့ မတော်တဆ ရခဲ့တဲ့ကလေး ဖျက်ချတဲ့ အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်အကြောင်း ပြောသလို အေးအေးဆေးဆေး ပြောနေနိုင်တာမျိုးလည်း ကြားခဲ့ဖူးတယ် …။
မြန်မာပြည်မှာနော် မြန်မာပြည်မှာ ကြားတာ။ သူများစကားပြောတာ သွားပြီး ချောင်းနားမထောင်ပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တီးတိုးတီးတိုး သူတို့အချင်းချင်း ပြောနေတာကို ကြားခဲ့ပြီး တအံ့တသြ ဖြစ်ခဲ့ရတာ။ ကိုယ်ကြားသလို သူတို့ အနီးအနားက တခြားသူတွေလည်း ကြားနိုင်တာပဲ …။
မိန်းကလေး တွေကတော့ ရုပ်ကလေး ငယ်ငယ်နုနု ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် လေးတွေနဲ့ မထင်ရက်စရာ လေးတွေပါ။ ရုံးဝတ်စုံ ဆင်တူလေး ဝတ်ထားတာ တွေ့ရခဲ့လို့ စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေမို့ ဒီလို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားတယ် လို့လည်း ပြောမရဘူးလေ။ အပျို လို့သာ ဆိုရတာ ယောကျာ်းလေး နဲ့လည်း စပ်ယှက်ဖူးတယ် ၊ ကလေးလည်း ဖျက်ချဖူးတယ် …။
ဘယ်မှာလဲ အရှက် ဆိုတာ.. ကလေးဖျက်တယ် ဆိုတာ ကလေးမွေးသလိုပဲ အရှက်ကုန် တာပါ။ ကလေးအကောင်လိုက် အသက်ရှင်လျက် ကျွေးမွေးပြုစုရတာနဲ့ အကောင် မရောက်တရောက် အသက် မရှိသေးတာ (တခါတလေ အသက် ရှိနေတာ) ကို သားအိမ်ထဲက ဖျက်ထုတ်လိုက်တာပဲ ကွာတယ် …။
အခါခါ ဖျက်ဖူးရင် အခါခါ အရှက်ကုန်သွားပြီမို့ အတူနေတယ် ဆိုတာလည်း မထူးဆန်းတော့ဘူး ၊ ဖျက်တယ် ဆိုတာလည်း မထူးဆန်းတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။ မထူးတော့ဘူး ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေက တွဲသမျှ ယောကျာ်းတိုင်းနဲ့ အိပ်ဖို့ အညှာ လွယ်တယ် …။
တခါတလေ ယောကျာ်လေးက မစရင်တောင် သူတို့တွေက စပြီး မြှူ ဆွယ် တတ်ကြတယ်။ သူတို့အတွက်က ဘာမှမထူးတော့ဘူး လို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် ခပ်သာသာ အမျိုးကောင်းသားလေး တွေ့ရင် အမိဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့စိတ်က ကြီးစိုးသွားခဲ့ပြီမို့ သူများခင်ပွန်း ၊ သူများရည်းစား ဆိုတာကိုလည်း စည်းထားပြီး မရှောင်နိုင်တော့ဘူးလေ …။
ယောကျ်ားတွေနဲ့ အခါခါနေ ၊ ကလေးအခါခါ ဖျက်ဖူးပြီ ဆိုတော့ မထူးဇတ်ခင်းရင်းနဲ့ ယောကျာ်း အထာလည်း နပ်လာတယ်။ မိန်းမကျမ်းကြေတဲ့ အမျိုးသား ဆိုတာ အမျိုးသမီးများစွာနဲ့ ပတ်သက် ဆက်ယှက်ဖူးလို့ မိန်းကလေး အထာသိပြီး ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမယ် လို့ ပါးနပ်နေတာပါ …။
ဒီအတိုင်း ပါပဲ။ ယောကျာ်းကျမ်း ကြေတဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတာ အမျိုးသားများစွာနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ယှက်ဖူးလို့ ယောကျာ်းလေး အထာသိပြီး ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ် လို့ ပါးနပ်နေတာပါ။ အပျိုစင် စစ်စစ်တွေထက် ဒီလို အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကို ပိုပြီး ညုတတ် ၊ ယုယတတ် ၊ ဆွဲဆောင်တတ်ကြတယ် …။
မိန်းမကျမ်းကြေတဲ့ အမျိုးသားတွေကလည်း လူပျို စစ်စစ်တွေထက် မိန်းကလေးတွေကို အညှာကိုင်နိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစားဟာ ဒီဘက်မှာ ဆရာကြီးတပိုင်း ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ ခပ်မြန်မြန် ရှောင်ပေတော့ပေါ့။ ကြာကြာဝါးလေ ခါးလေဆိုတာ သူတို့လို လူမျိုးတွေပါ …။
တချို့ကျတော့ လိင်အာသာ ဆန္ဒဖြည့်ဖို့ထက် တဦးအကြောင်းတဦး ပိုသိလိုပြီး တကယ်လည်းချစ် ၊ တကယ် လက်ထပ်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ အတူနေပြီး လက်ထပ်သွားကြတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လက်မထပ်ခင် အတူနေကြပါလို့ ကျွန်မက တိုက်တွန်းမှာ မဟုတ်သလို လက်မထပ်ခင် အတူမနေကြနဲ့လို့ ကျွန်မက ပိတ်ပင်တားဆီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး …။
ကိုယ့်စိတ် ၊ ကိုယ့်ကိုယ်မို့ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံပေါ့။ သူများတိုက်တွန်းလို့လည်း အတူမနေကြပါနဲ့။ တကယ် ဗိုက်ထွက်လာရင် ကိုယ့်ဗိုက်ပဲ ထွက်လာမှာ။ ကြာကြာဝါးမယ့်သွား အရိုးကြည့်ရှောင် ဆိုသလို နေချင်သပ ဆိုလည်း နေကြပေါ့ …။
ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး ရာဘာလေးတော့ သုံးပေါ့။ ရေရှည်ကျန်းမာရေးအရ ဒီလိုပဲ တိုက်တွန်းရမှာပဲ။ ဆေးထိုးရင်လည်း အမျိုးသမီး ၊ ဆေးသောက်တော့လည်း အမျိုးသမီး ၊ လက်မောင်းပိုက်ထည့်လည်း အမျိုးသမီး ၊ Loop ထည့်လည်း အမျိုးသမီး ၊ သားအိမ်ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ရင် ကလေး ရနိုင်တာမို့ ကလေးမရချင်ရင် ကလေးမရအောင် တားရမှာက မိန်းမသားတွေရဲ့ ဘဝပေးတာဝန်ပါ …။
နောင်မှ ကိုယ့်လူက တာဝန်မယူလို့ အပြစ်မတင်နဲ့လေ။ သူတာဝန် ယူယူ ၊ မယူယူ ကိုယ့်တာဝန်တော့ ကိုယ်ယူပါ။ ကျွန်မသာ အကြံပေးခွင့် ရမယ်ဆို ချစ်ရုံနဲ့ အတူမနေပါနဲ့။ ယောကျ်ားကောင်း မဟုတ်တဲ့သူနဲ့ ဆုံခဲ့ရင် ကိုယ့်မိန်းမ တန်ဖိုးပဲ ကျတာ။ သိက္ခာချတတ်တဲ့ သူနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ့်မိန်းမသိက္ခာနဲ့ အိန္ဒြေတွေပဲ ကျတာပါ …။
လူ့အတွင်းစိတ် ဆိုတာ အပြင်ပန်း ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်တာမို့ အနည်းဆုံး ခြောက်လ ၊ တနှစ်လောက်တော့ သူ့အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာပြီး သူနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ ရှေ့ဆက် အတူလက်တွဲလိုတယ် ဆို နှစ်ဦးသား လက်ထပ်ဖို့ ငွေစု ၊ ဆန္ဒကြီးတော့လည်း အတူနေကြပေါ့။ (သူ့စိတ် သူ့သဘောမို့ ကိုယ်တားလည်း ရတာမှ မဟုတ်တာ။)
အတူနေပြီး သူနဲ့ အခန့်မသင့်လို့ ကွဲသွားသည့်တိုင် မထူးဇတ်ခင်းပြီး တွဲတဲ့သူတိုင်းနဲ့ အိပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ စိတ်ဓါတ် ကျပြီးတော့လည်း တွေ့ရာသူနဲ့ တွဲနေတာ ၊ ဖြစ်ပျက်ချင်သလို ဖြစ်ပျက်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ သုံးလိုက်တဲ့ ဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ဆိုတာ ကိုယ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တာ …။
အတည်မယူဘဲ တွဲတုန်း အတူနေဖြစ်ခဲ့လို့ သုံးခဲ့တဲ့ ဆေးတွေကြောင့် တကယ် အိမ်ထောင်ရက်သား ကျလို့ ကလေး အတည် ယူချင်ပါတယ် ဆိုလို့ မရနိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေ အများကြီး။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ပဲ သိတယ်လေ။ ဒီကိုယ်ကြီးက သက်သေပြနေတာပေါ့ …။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အတည် မယူသေးဘဲ အတူမနေပါနဲ့။ ဆူးပေါ် ဖက်ကျကျ ဖက်ပေါ် ဆူးကျကျ ဖက်ပဲပေါက်တဲ့ မိန်းကလေး သဘာဝမို့ မိန်းမသား ဆိုတာ နာဖက်ကပါပဲ …။
Credit – Burmesehearts
သ မီး မ မွေး မ ချင်း က လေး ဆက် ယူ ဦး မယ် ဆို တဲ့ ထူး ထူး ခြား ခြား သား ချည်း ၁ ၃ ယောက် မွေး ထား ပြီး တဲ့ စုံ တွဲ …